Fanambaràna Hisianà Aterineto Maimaimpoana · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Novambra 2017 11:11 GMT
Vao namoaka sosokevitra enina izay tokony harahin'ny fanjakana sy ny orinasa mba ahafahana miantoka aterineto maimaimpoana ny Reporters Without Borders sy ny OSCE (Fikambanana ho an'ny fandriampahalemana sy ny fiarahamiasa any Eoropa).
Lahatsoratra feno amin'ilay fanambarana :
1. Tokony hifàka tsara ao anatin'ny zo hanana fahafahana maneho hevitra ny lalàna rehetra mikasika ny fikorinan'ny fampahalalam-baovao amin'ny aterineto, araka ny voafaritra ao amin'ny Toko faha-19 ao amin'ny Fanambarana Iraisam-pirenena momba ny Zon'olombelona.
2. Ao anatina fiarahamonina demokratika sy misokatra dia miankina amin'ny vahoaka tsirairay ny fanapahana hevitra amin'ny zavatra tiany hidirana sy hojerena amin'ny aterineto. Tsy azo ekena ny fanivanana na fanombanana ataon'ny governemanta amin'ireo votoaty ao amin'ny aterineto. Ny mpampiasa Aterineto irery ihany no tokony mametraka ny fanivanana. Na inona na inona politikan'ny fanivanana, na amin'ny sehatra nasionaly na isam-paritra, dia mifanohitra amin'ny fitsipika momba ny fikoriana malalaky ny vaovao.
3. Na inona na inona fangatahan'ny manam-pahefanam-panjakanaa hanoratana anarana ny tranonkala rehetra dia tsy azo ekena. Mifanohitra amin'ny fanomezana ny lisansa ho an'ireo loharano tsy fahita firy toy ny onjampeo, tsy manamarina ny fanolorana ofisialy ny lisansa ny habetsahan'ireo fotodrafitrasa tahaka ny Aterineto. Mifanohitra amin'izany mihitsy, mety hanakana ny fifanakalozan-kevitra, ary ny fampahalalam-baovao amin'ny aterineto amin'ny fomba malalaka ny tsy maintsy fanoratana anarana ireo votoaty amin'ny aterineto.
4. Tsy tokony tanozina ho tomponandraikitra noho ny fampitana fotsiny na fampiantranoana votoaty ny mpandraharaha ara-teknika raha tsy hoe mandà ny hankato didim-pitsaràna ilay mpanolotra fampiantranoana. Ny mpitsara irery ihany no afaka manapaka hevitra amin'ny maha-ara-dalàna na tsia ny tranonkala iray, fa tsy ny mpanome tolotra. Tokony hiantohan'ny dingana tahaka izany ny fangaraharàna, ny fandraisana andraikitra ary ny zo hampakatra fitsarana ny didy.
5. Tokony fehezin'ny lalànan'ny firenena niaviany daholo ireo votoaty rehetra amin'ny aterineto (”lalàna fampakarana votoaty”) fa tsy ny lalànan'ilay firenena nitrohana azy.
6. Manafangaro karazana media maro ny Aterineto, ary miha-mivoatra ireo fitaovana vaovao fizarana votoaty, toy ny fanoratana blaogy. Tokony harovana araka ny lalàna eo ambanin'ny fitsipika fototry ny zo haneho hevitra amin'ny fomba malalaka ireo mpanoratra amin'ny aterineto sy ireo mpanao gazety anaty tambajotra, ary ireo zo fanampiny amin'ny fiainana manokana sy fiarovana ny loharanom-baovao.
Amporisihany ireo mpitoraka blaogy manerana izao tontolo izao mba handika ity fanambarana ity amin'ny teny maro. Raha mba manao izany ianao dia mba hampahafantaro anay amin'ny sokajy ”fanehoankevitra” etsy ambany ny rohy nandikanao azy .
Milaza ny RSF fa antenainy ity fanambaràna ity ”hiteraka fifanakalozandresaka amin'ny fomba fijery mankamin'ny Vovonambe Erantanin'ireo Orinasa Mpikirakira Fampahalalam-baovao (WSIS).
FANAVAOZANA: Efa nanao fandikana amin'ny teny shinoa i Portnoy ao amin'ny Working Man .